NIVORY tao Moscou ny manam-pahaizana avy any amin’ny firenena 40 mahery, tamin’ny 20 ka hatramin’ny 22 Mey 2011, mba hankalaza ny faha-60 taonan’ny Fikambanana Eoropeanina Momba ny Fandidiana Fo sy Lalan-dra ary Mpanelira. Hoy ny mpanao gazety rosianina iray: “Zava-dehibe amin’ny dokotera ny fihaonam-be hoatran’io, toy ny Lalao Olympika izay zava-dehibe amin’ny mpanao fanatanjahan-tena.”
Nitana trano heva iray ny Sampan’asan’ny Filan-kevitra Momba ny Hopitaly (SFH), an’ny Vavolombelon’i Jehovah, mba hanazavany ny fomba fitsaboana tsy ampiasana ra. Be dia be no nitsidika azy io nandritra ny telo andro ary dokotera maro no naka DVD, boky, lahatsoratra, ary taratasy mivalona an-jatony momba ny fitsaboana tsy ampiasana ra. Be mpitady ilay DVD misy an’ilay hoe Fitsaboana Solon’ny Fampidiran-dra: Tsotra, Azo Antoka, Tsara. *
Ilay trano hevan’ny Sampan’asan’ny Filan-kevitra Momba ny Hopitaly, an’ny Vavolombelon’i Jehovah. Maro ny dokotera nankeo mba haka DVD, boky, lahatsoratra, ary taratasy mivalona an-jatony momba ny fitsaboana tsy ampiasana ra
Niaiky ny dokotera maro nitsidika an’ilay trano heva hoe tena ilaina ny mitandrina mba tsy ho be ny ra very rehefa mandidy. Nilaza ny dokotera iray mpandidy fo avy any Italia, izay nanao famelabelarana tamin’ilay fivoriana, fa fantany tsara ny Vavolombelon’i Jehovah. Efa nandidy fon’ny Vavolombelona 70 teo ho eo izy, ary tsy nampiasa ra nefa tsy nahita olana. Nilaza koa izy fa efa zatra tsy mampiasa ra ny hopitaly iasany rehefa mandidy. Nisy dokotera ao amin’ny Foibem-pikarohana Momba ny Fo ao Berlin, any Alemaina, naka DVD roa ho azy sy ny mpiara-miasa aminy. Nilaza izy fa vao haingana no nandidy zazakely nilanja roa kilao sy sasany nefa tsy nampiasa ra. Efa nahavita nandidy fon’ny zaza mbola kely lanja noho izany aza ilay hopitaly iasany.
Mahomby ny fandidiana tsy ampiasana ra rehefa mitandrina ny dokotera mba tsy ho very ra be ny marary. Misy fanafody sy teknika fandidiana ary fitaovana manokana ampiasaina amin’izany
Iray volana taorian’io, dia nisy dokotera avy any amin’ny firenena samihafa tonga tao Belomorsk mba hanatrika ny Fivoriana Fahefatry ny Dokotera Miandraikitra ny Fanatoranana sy ny Fikarakarana Olona Marary Mafy, any Amin’ny Faritra Avaratrandrefan’i Rosia. Nanana trano heva tao koa ny SFH ary maro no nitsidika azy io. Hoy ny dokotera iray avy any Saint-Pétersbourg rehefa nahita ny zavatra naseho tao: “Ity mihitsy no ilainay.” Nilaza ny alahelony izy satria entim-pahazarana fotsiny ny mpiara-miasa aminy sasany ka mampiditra ra amin’ny olona may. Faly erỳ izy nilaza hoe: “Hisy kaonferansa momba ny fitsaboana olona may any Saint-Pétersbourg, ary tena ilaina amin’io ireto zavatra avoakanareo ireto.”
Mihamaro izao eran-tany ny dokotera mahita hoe tena tsara ny fitsaboana sy ny fandidiana tsy ampiasana ra. Ho hita eo ihany raha ho lasa fomba fitsaboana filamatra izany, indray andro any.
^ feh. 3 Navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.